ui/chromeos/translations/ui_chromeos_strings_my.xtb - chromium/src - Git at Google
chromium / chromium / src / 80.0.3987.116 / . / ui / chromeos / translations / ui_chromeos_strings_my.xtb
blob: 219cda8539743daab4db784ca296565f88fb7b39 [file] [log] [blame]
<translation id="1000498691615767391">ဖွင့်ရန် ဖိုလ်ဒါကို ရွေးပါ</translation>
<translation id="1023220960495960452">အက္ခရာဖလှယ်မှု (vanakkam → வணக்கம்)</translation>
<translation id="1035094536595558507">ဆလိုက် မြင်ကွင်း</translation>
<translation id="1045157690796831147">အက္ခရာဖလှယ်မှု (namaskar → നമസ്കാരം)</translation>
<translation id="1046068652463704410">ဂျပန်စာ ထည့်သွင်းမှု (US ကီးဘုတ်အတွက်)</translation>
<translation id="1047956942837015229">အရာ <ph name="COUNT" />ခုကို ဖျက်နေ...</translation>
<translation id="1049926623896334335">Word စာတမ်း</translation>
<translation id="1065449928621190041">ကနေဒါ ပြင်သစ် ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="1119069657431255176">Bzip2 စနစ်ဖြင့် ချုံ့ထားသော tar ဖိုင်မှတ်တမ်း</translation>
<translation id="1120073797882051782">ဟံဂူလ် Romaja</translation>
<translation id="1148097584170732637"><ph name="FILE_COUNT" /> တွေ့ပါသည်။
စက်အတွင်း သိုလှောင်မှုတွင် နေရာမလုံလောက်ပါ။ နောက်ထပ် <ph name="FILE_SIZE" /> လိုအပ်ပါသည်။
<translation id="115443833402798225">ဟံဂူလ် Ahnmatae</translation>
<translation id="117624967391683467"><ph name="FILE_NAME" /> ကူးယူနေ...</translation>
<translation id="1190144681599273207">ဒီဖိုင်ကို ရယူခြင်းက မိုဘိုင်း ဒေတာ၏ <ph name="FILE_SIZE" />ခန့်ကို အသုံးပြုမည်။</translation>
<translation id="1208421848177517699">အက္ခရာဖလှယ်မှု (namaste → નમસ્તે)</translation>
<translation id="1243314992276662751">အာပ်လုဒ် လုပ်ရန်</translation>
<translation id="1278813325885878377">ဟန်ဂေရီ QWERTY ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="1297922636971898492">Google Drive ယခုမရသေးပါ။ Google Drive ပြန်လာသည်နှင့် တင်ခြင်း အလိုအလျောက် ပြန်စပါမည်။</translation>
<translation id="1307931752636661898">Linux ဖိုင်များကို ကြည့်၍မရပါ</translation>
<translation id="1310751437842832374">အက္ခရာဖလှယ်မှု (mausam → ନମସ୍ତେ)</translation>
<translation id="1337036551624197047">ချက် ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="1351692861129622852">ဖိုင် <ph name="FILE_COUNT" /> ဖိုင် တင်သွင်းနေစဉ်...</translation>
<translation id="1352103415082130575">ထိုင်း ကီးဘုတ် (Pattachote)</translation>
<translation id="1358735829858566124">ဖိုင်သို့မဟုတ် လမ်းကြောင်း အသုံးပြု၍ မရပါ။</translation>
<translation id="1378727793141957596">Google Drive မှကြိုဆိုပါသည်!</translation>
<translation id="1395262318152388157">ဆလိုက်ဒါးကို ရှာပါ</translation>
<translation id="1399648040768741453">တဲလ်ဂူ (Phonetic)</translation>
<translation id="1439494416798956626"><ph name="FOLDER_NAME" /> ဖိုင်တွဲသို့ ရွှေ့ထားသည်။</translation>
<translation id="1441841714100794440">ဗီယက်နမ် ကီးဘုတ် (Telex)</translation>
<translation id="1455548678241328678">နော်ဝေ ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="1464724975715666883">မှားယွင်းမှု ၁ ခု</translation>
<translation id="1474339897586437869">" <ph name="FILENAME" /> " ကို အပ်လုဒ် လုပ်မရခဲ့ပါ။ သင်၏ Google Drive ထဲတွင် နေရာ မလုံလောက်ပါ။</translation>
<translation id="1497522201463361063">"<ph name="FILE_NAME" />"ကို အမည်ပြောင်း မရပါ။ <ph name="ERROR_MESSAGE" /></translation>
<translation id="1538729222189715449">Linux ဖိုင်များကို ဖွင့်နေသည်...</translation>
<translation id="1547964879613821194">ကနေဒါ အင်္ဂလိပ်</translation>
<translation id="1556189134700913550">အားလုံး အတွက် အသုံးပြုရန်</translation>
<translation id="1572585716423026576">နောက်ခံအဖြစ် သတ်မှတ်ရန်</translation>
<translation id="158809615184981282">ဖာရိုဇ် ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="1646136617204068573">ဟန်ဂေရီ ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="164729547906544836">တမီးလ် ကီးဘုတ် (itrans)</translation>
<translation id="164969095109328410">Chrome ကိရိယာ</translation>
<translation id="1665611772925418501">ဖိုင်ကို မွမ်းမံ မပေးနိုင်ခဲ့ပါ။</translation>
<translation id="1673103856845176271">လုံခြုံရေးအချက်လက်များကြောင့် ဤဖိုင်အား အသုံးပြု၍ မရပါ။</translation>
<translation id="169515659049020177">Shift ကီး</translation>
<translation id="1722487484194605434">ဖိုင် <ph name="NUMBER_OF_ITEMS" /> ခု ဇစ်လုပ်နေသည်…</translation>
<translation id="174173592514158117">Play ဖိုင်တွဲအားလုံး ပြရန်</translation>
<translation id="180035236176489073">ဤဖိုင်များကို အသုံးပြုရန် သင် online ဖြစ်ရန် လိုသည်။</translation>
<translation id="1807938677607439181">ဖိုင်များ အားလုံး</translation>
<translation id="1815861158988915678"><ph name="BEGIN_BOLD" />သတိထားရန်:<ph name="END_BOLD" /> ဒီဖိုင်များမှာ ယာယီဖြစ်ကြပြီး ဒီစ်က် နေရာ လွတ်လာရေး အတွက် အလိုအလျောက် ဖျက်ခံရနိုင်သည်။ <ph name="BEGIN_LINK" />ပိုမို လေ့လာရန်<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="183183971458492120">အချက်အလက်များကို ဖွင့်နေသည်...</translation>
<translation id="1838709767668011582">Google ဆိုက်</translation>
<translation id="1844692022597038441">ဒီဖိုင်ကို အော့ဖ်လိုင်း မရနိုင်ပါ။</translation>
<translation id="184633654410729720">ထိုင်း ကီးဘုတ် (Kedmanee)</translation>
<translation id="1864756863218646478">ဖိုင်ကို မတွေ့နိုင်ပါ။</translation>
<translation id="1921986354447415460">Turkish-F ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="1933345018156373194">ရွှေ့၍မရပါ၊ မျှော်လင့်မထားသည့် အမှား- <ph name="ERROR_MESSAGE" /></translation>
<translation id="1943097386230153518">ဝန်ဆောင်မှုအသစ် ထည့်သွင်းပါ</translation>
<translation id="1947424002851288782">ဂျာမန် ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="1972984168337863910">ဖိုင်တုံ့ပြန်မှု အကန့်များ ချဲ့ပြရန်</translation>
<translation id="1984603991036629094">အားမေနီးယား Phonetic ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="2001796770603320721">Drive တွင် စီမံပါ</translation>
<translation id="2009067268969781306">ဒရိုက်ဗ်တစ်ခုကို ဖော်မက်ချခြင်းသည် ၎င်းပေါ်ရှိ ဒေတာများအားလုံးကို ဖျက်လိုက်ပါမည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကို ပြန်ပြင်၍ မရပါ။</translation>
<translation id="2028997212275086731">RAR စနစ်ဖြင့် ချုံ့ထားသော ဖိုင်မှတ်တမ်း</translation>
<translation id="2070909990982335904">အစက်ဖြင့်စသော အမည်များသည် စနစ်တွက် ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ အခြားအမည်ရွေးပါ။</translation>
<translation id="2080010875307505892">ဆာဘီးယံ ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="2085470240340828803">ဖိုင် အမည် "<ph name="FILENAME" />" ရှိနှင့်နေပြီ။ သင် ဘယ်လို လုပ်စေချင်ပါသလဲ?</translation>
<translation id="2136953289241069843">အက္ခရာဖလှယ်မှု (namaste → नमस्कार)</translation>
<translation id="2138867954865495510">"<ph name="PATH" />" ကို ဖွင့်၍မရပါ- <ph name="ERROR_MESSAGE" /></translation>
<translation id="2163152940313951844">အက္ခရာ မမှန်ကန်ပါ- <ph name="CHARACTER_NAME" /></translation>
<translation id="2164862903024139959">ဗီယက်နမ် ကီးဘုတ် (TCVN)</translation>
<translation id="2168214441502403371">ပါရှား ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="2198315389084035571">ရိုးရှင်း တရုတ်</translation>
<translation id="2208158072373999562">Zip မှတ်တမ်း</translation>
<translation id="2225536596944493418">အကြောင်းအရာ <ph name="NUMBER_OF_ITEMS" />ခုကို ဖျက်လိုသည်မှာ သေချာသလား။</translation>
<translation id="2230062665678605299">ဖိုလ်ဒါ "<ph name="FOLDER_NAME" />"ကို ဖန်တီး မရခဲ့ပါ။ <ph name="ERROR_MESSAGE" /></translation>
<translation id="2278988676849463018">ကန္နာဒါ ကီးဘုတ်(Phonetic)</translation>
<translation id="2288278176040912387">ကစားသူ မှတ်တမ်းတင်</translation>
<translation id="2291538123825441971">ဖိုင် <ph name="NUMBER_OF_FILES" /> ခု ဖွင့်နေသည်။</translation>
<translation id="2303301624314357662"><ph name="FILE_NAME" />ဖိုင် ကို ဖွင့်နေသည်။</translation>
<translation id="2305020378527873881"><ph name="VOLUME_NAME" /> ကို ထုတ်ပယ်ထားသည်။</translation>
<translation id="2325650632570794183">ဤဖိုင်အမျိုးစားအား မထောက်ပံ့ပါ။ Chrome ဝက်ဘ်စတိုးသို့ဝင်ရောက်ကာ ဤဖိုင်အမျိုးစားကို ဖွင့်နိုင်သည့် အက်ပ် ကိုရှာပါ။</translation>
<translation id="23434688402327542">ကာဇတ် ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="2352947182261340447">စက်အတွင်း သိုလှောင်မှုတွင် နေရာမလုံလောက်ပါ။</translation>
<translation id="2377319039870049694">စာရင်းမြင်ကွင်းသို့ ပြောင်းရန်</translation>
<translation id="2377590462528165447">Linux နှင့် ဖိုင်တွဲ <ph name="NUMBER_OF_ITEMS" /> ခု မျှဝေထားသည်</translation>
<translation id="2378075407703503998"><ph name="SELCTED_FILE_COUNT" /> ဖိုင်များ ရွေးချယ်ထားသည်</translation>
<translation id="2384596874640104496">ဆင်ဟာလာ ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="240770291734945588"><ph name="SPACE_AVAILABLE" /> အသုံးပြုနိုင်သည်</translation>
<translation id="2425665904502185219">စုစုပေါင်းဖိုင် အရွယ်အစား</translation>
<translation id="2453576648990281505">ဖိုင်မှာ ရှိနှင့်နေပြီ</translation>
<translation id="247772113373397749">ကနေဒါ ဘာသာစုံ ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="2494837236724268445">ဂူဂျရာသီ ကီးဘုတ် (Phonetic)</translation>
<translation id="2529133382850673012">US ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="2542049655219295786">Google ဇယား</translation>
<translation id="2547921442987553570"><ph name="EXTENSION_NAME" /> သို့ထည့်ပါ</translation>
<translation id="2614589611416690597"><ph name="VIDEO_TYPE" /> ဗီဒီယို</translation>
<translation id="2620090360073999360">ဒီတစ်ချီမှာ Google ဒရိုက်ဗ် လက်လှမ်း မမှီပါ။</translation>
<translation id="2638942478653899953">Google Drive အားမချိတ်ဆက် နိုင်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ <ph name="BEGIN_LINK" />ထွက်<ph name="END_LINK" /> ကာ ပြန်ဝင်ပါ။</translation>
<translation id="2672394958563893062">အမှား ကြုံခဲ့သည်။ အစမှ ပြန်လည်စတင်ရန် ကလစ်ပါ။</translation>
<translation id="2735698359135166290">ရူမေနီးယား ပုံမှန် ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="2782104745158847185">Linux အပလီကေးရှင်းကို ထည့်ရာတွင် အမှားအယွင်းရှိနေသည်</translation>
<translation id="2787047795752739979">မူရင်းကို ဖျက်ရေးရန်</translation>
<translation id="2790805296069989825">ရုရှား ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="2843806747483486897">ပုံသေကို ပြောင်းရန်...</translation>
<translation id="2870836398458454343">အက္ခရာဖလှယ်မှု (marhaban ← مرحبا)</translation>
<translation id="2887525882758501333">PDF စာရွက်စာတမ်း</translation>
<translation id="2888807692577297075">&lt;b&gt;"<ph name="SEARCH_STRING" />"&lt;/b&gt;နှင့် တိုက်ဆိုင်သည့် အရာများ မရှိ</translation>
<translation id="2902312830803030883">နောက်ထပ် လုပ်ဆောင်ချက်များ</translation>
<translation id="2902734494705624966">တိုးချဲ့ US</translation>
<translation id="2924296707677495905">အက္ခရာဖလှယ်မှု (namaskaram → ನಮಸ್ಕಾರ)</translation>
<translation id="2942290791863759244">ဂျာမန် NEO ၂ ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="2943503720238418293">ပိုတိုသောအမည်ကို အသုံးပြုပါ</translation>
<translation id="2963783323012015985">တူရကီ ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="2966459079597787514">ဆွီဒင် ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="2984337792991268709">ယနေ့ <ph name="TODAY_DAYTIME" /></translation>
<translation id="2994669386200004489"><ph name="FILE_NAME" /> ကို မိတ္ထူမပွားနိုင်ပါ</translation>
<translation id="3003633581067744647">ပုံသေးမြင်ကွင်းသို့ ပြောင်းရန်</translation>
<translation id="3007214526293698309">အချိုးအစား သတ်မှတ်ရန်</translation>
<translation id="3057861065630527966">သင့်ဓာတ်ပုံများနှင့် ဗီဒီယိုများကို အရံသိမ်းဆည်းပါ</translation>
<translation id="3064388234319122767">အက္ခရာဖလှယ်မှု (zdravo → здраво)</translation>
<translation id="3078461028045006476"><ph name="EXTENSION_NAME" /> နှင့်မျှဝေပါ</translation>
<translation id="3088034400796962477">အက္ခရာဖလှယ်မှု (salam ← سلام)</translation>
<translation id="3116361045094675131">UK ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="3157729859914172001">US အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ (PC) ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="3187212781151025377">ဟေဗြဲ ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="3224239078034945833">ကနေဒါ ဘာသာစကားများစွာ</translation>
<translation id="3236289833370040187">ပိုင်ဆိုင်မှုကို <ph name="DESTINATION_DOMAIN" /> သို့ လွှဲပြောင်းပါမည်။</translation>
<translation id="3245321423178950146">အမည်မသိရ အနုပညာရှင်</translation>
<translation id="3254434849914415189"><ph name="FILE_TYPE" /> ဖိုင်များ အတွက် ပုံသေ အက်ပ်ကို ရွေးရန်:</translation>
<translation id="3326821416087822643">ဇီပ်လုပ်နေ <ph name="FILE_NAME" />...</translation>
<translation id="3338239663705455570">ဆလိုဗီနီးယား ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="3353984535370177728">တင်ရန် ဖိုလ်ဒါကို ရွေးပါ</translation>
<translation id="3399597614303179694">မက်ဆီဒိုးနီးယား ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="3414856743105198592">ဖြုတ်တပ်ရသော မီဒီယာကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းသည် ဒေတာအားလုံးကို ဖျက်ပစ်လိမ့်မည်။သင်ရှေ့ဆက်လိုပါသလား?</translation>
<translation id="3466147780910026086">သင့်မီဒီယာကို ဖတ်နေသည်...</translation>
<translation id="3468522857997926824"><ph name="FILE_COUNT" /> ဓါတ်ပုံများကို <ph name="BEGIN_LINK" /> Google Drive <ph name="END_LINK" /> သို့အရံသိမ်းဆည်းမည်</translation>
<translation id="3473378059788601120"><ph name="FOLDER_NAME" /> သို့ မိတ္တူကူးထားသည်။</translation>
<translation id="3495304270784461826"><ph name="COUNT" /> အမှားများ။</translation>
<translation id="3519867315646775981">အက္ခရာဖလှယ်မှု (shalom ← שלום)</translation>
<translation id="3549797760399244642">drive.google.com သို့သွားရန်...</translation>
<translation id="3583509704582854624">အက္ခရာနှင့် ကိန်းဂဏန်းများ ထည့်သွင်းမှု (ဂျပန်ကီးဘုတ်အတွက်)</translation>
<translation id="3603385196401704894">ကနေဒါမွေး ပြင်သစ်</translation>
<translation id="3609785682760573515">စင့်က် လုပ်နေ...</translation>
<translation id="3645531960514756307">ဖိုင်တွဲကို ပင်ဖြုတ်ရန်</translation>
<translation id="3678559383040232393">Maltese ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="3685122418104378273">မိုဘိုင်း ဒေတာကို အသုံးပြုချိန်မှာ ပုံသေအားဖြင့် Google ဒရိုက်ဗ် စင့်ကို ပိတ်ထားသည်။</translation>
<translation id="3689865792480713551"><ph name="ACTIVITY_DESCRIPTION" /> ကို ပယ်ဖျက်မည်။</translation>
<translation id="3726463242007121105">ဤစက်ပစ္စည်း၏ ဖိုင်စနစ်ကို မထောက်ပံ့သောကြောင့် ဖွင့်၍မရပါ။</translation>
<translation id="3741243925913727067">Google Drive သို့သင့်မီဒီယာ၏ ဓာတ်ပုံများနှင့် ဗီဒီယိုများကို အရံသိမ်းဆည်းမည်။</translation>
<translation id="3749289110408117711">ဖိုင် အမည်</translation>
<translation id="3780536599611287598">ဖိုင်များကို '<ph name="FOLDER_NAME" />' သို့ ရွှေ့ရန် သင့်ထံတွင် ခွင့်ပြုချက်မရှိပါ။</translation>
<translation id="3786301125658655746">သင်သည် အော့ဖ်လိုင်း ဖြစ်နေ</translation>
<translation id="3811494700605067549">ဖိုင် ၁ ခုရွေးချယ်ထားသည်</translation>
<translation id="3815016854028376614">Zhuyin ရိုက်သွင်းမှု နည်း</translation>
<translation id="3825863595139017598">မွန်ဂိုလီယား ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="38275787300541712">ပြီးသွားလျှင် Enter နှိပ်ပါ</translation>
<translation id="3833761542219863804">အက္ခရာဖလှယ်မှု (mausam → ਮੌਸਮ)</translation>
<translation id="3856075812838139784">ဖတ်ရန် အတွက်သာ</translation>
<translation id="3858678421048828670">အီတလီ ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="386548886866354912"><ph name="EXTENSION_NAME" /> ဖြင့်ထုပ်ပိုးပါ</translation>
<translation id="3910699493603749297">ခမာ ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="391445228316373457">နီပေါ ကီးဘုတ် (Phonetic)</translation>
<translation id="3966388904776714213">အသံဖွင့် ကိရိယာ</translation>
<translation id="4072248638558688893">တမီးလ် ကီးဘုတ် (Phonetic)</translation>
<translation id="4158739975813877944">သီချင်းစာရင်းကို ဖွင့်ပါ</translation>
<translation id="418179967336296930">ရုရှ အသံထွက်ဆိုင်ရာ (YaZHert) ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="4193154014135846272">Google စာရွက်စာတမ်း</translation>
<translation id="4195249722193633765">Linux (စမ်းသပ်ဆော့ဖ်ဝဲ) ဖြင့် အက်ပ်ကို ထည့်သွင်းခြင်း</translation>
<translation id="421017592316736757">ဒီဖိုင်ကို ရယူသုံးရန် သင်သည် အွန်လိုင်း ဖြစ်ရမည်။</translation>
<translation id="4212740939091998969">"<ph name="FOLDER_NAME" />" အမည်ဖြင့် ဖိုင်တွဲ ရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။ အခြားအမည်တစ်ခု ရွေးပါ။</translation>
<translation id="4215448920900139318"><ph name="FILE_COUNT" /> ကို မိတ္ထူပွားနေပါသည်</translation>
<translation id="426015154560005552">အာရပ် ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="4261901459838235729">Google မိတ်ဆက်ပြွ</translation>
<translation id="4290535918735525311">Linux နှင့် မျှဝေထားသည့် ဖိုင်တွဲ ၁ ခု</translation>
<translation id="4298972503445160211">ဒိန်းမတ် ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="4309915981827077375">အထွေထွေ အချက်အလက်</translation>
<translation id="4336032328163998280">ကူးယူရန် လုပ်ကိုင်မှု မအောင်မြင်ခဲ့ပါ။ <ph name="ERROR_MESSAGE" /></translation>
<translation id="4465830120256509958">ဘရာဇီးလ် ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="4470564870223067757">ဟံဂူလ် ၂ စုံ</translation>
<translation id="4477219268485577442">ဘာလ်ဂေရီယမ် အသံထွက်</translation>
<translation id="4479812471636796472">US Dvorak ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="4487088045714738411">ဘယ်လ်ဂျီယံ ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="4552678318981539154">နောက်ထပ် သိုလှောင်ခြင်း ဝယ်မည်</translation>
<translation id="4572815280350369984"><ph name="FILE_TYPE" /> ဖိုင်</translation>
<translation id="4579744207439506346"><ph name="ENTRY_NAME" /> ကို ရွေးချယ်မှုသို့ ထည့်ထားသည်။</translation>
<translation id="4582497162516204941">Linux (စမ်းသပ်ဆော့ဖ်ဝဲ) ဖြင့် ထည့်သွင်းခြင်း</translation>
<translation id="4594543368593301662"><ph name="SEARCH_TERM" /> အတွက် ရလဒ်များ ပြထားသည်</translation>
<translation id="4669606053856530811">ဤအရာများကို '<ph name="SOURCE_NAME" />' ၏ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် မျှဝေထားခြင်း မရှိလျင် ၎င်းတို့သည် အသုံးပြုခွင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ပါသည်။</translation>
<translation id="4697043402264950621"><ph name="COLUMN_NAME" /> အရ ငယ်စဉ်ကြီးလိုက် စီထားသော ဖိုင်စာရင်း။</translation>
<translation id="4713544552769165154">ဒီဖိုင်မှာ Macintosh ဆော့ဝဲကို သုံးသည့် ကွန်ပျူတာ အတွက် ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Chrome OS ကို သုံးနေသည့် သင်၏ ကိရိယာ နှင့် လိုက်ဖက်မညီပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီး <ph name="BEGIN_LINK" />Chrome ဝဘ် စတိုး<ph name="END_LINK" /> မှာ အစားထိုးရန် သင့်တော်သည့် အက်ပ်ကို ရှားကြည့်ပါ။<ph name="BEGIN_LINK_HELP" />ပိုမို လေ့လာရန်<ph name="END_LINK_HELP" /></translation>
<translation id="4724850507808590449"><ph name="FILE_COUNT" /> ဓာတ်ပုံများ အရံသိမ်းဆည်းပြီးပါပြီ</translation>
<translation id="4732760563705710320">ဆောရီး၊ ဤဗွီဒီယိုအား သင့် cast စက်တွင် ကြည့်မရပါ။</translation>
<translation id="4734518477988699048">ထည့်သွင်းသည့်တန်ဖိုးသည် မှန်ကန်မှုမရှိပါ။</translation>
<translation id="4749157430980974800">ဂျော်ဂျီယား ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="4755240240651974342">ဖင်လန် ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="4779136857077979611">အိုနီဂီရိ ထမင်းဆုပ်</translation>
<translation id="4784330909746505604">PowerPoint တင်ဆက်ပြသခြင်း</translation>
<translation id="4801956050125744859">နှစ်ခုစလုံးကို ထားရှိရန်</translation>
<translation id="4823651846660089135">စက်ပစ္စည်းကို ဖတ်ခွင့်သာရှိသည်</translation>
<translation id="4839847978919684242">အရာ <ph name="SELCTED_FILES_COUNT" />ခု ရွေးထား</translation>
<translation id="4867079195717347957">ကော်လံကို ကြီးစဉ်ငယ်လိုက်စီရန် နှိပ်ပါ။</translation>
<translation id="4873265419374180291"><ph name="NUMBER_OF_BYTES" /> ဘိုက်</translation>
<translation id="4880214202172289027">အတိုးအကျယ် ဆလိုက်ဒါး</translation>
<translation id="4886021172213954916">တမီးလ် ကီးဘုတ် (လက်နှိပ်စက်)</translation>
<translation id="4905417359854579806"><ph name="FILE_COUNT" /> ကို မိတ္ထူပွားရန် အသင့်ဖြစ်ပါပြီ</translation>
<translation id="497244430928947428">မလေးလံ ကီးဘုတ် (Phonetic)</translation>
<translation id="4973523518332075481">စကားလုံး <ph name="MAX_LENGTH" /> လုံးနှင့် အောက်ရှိသည့် အမည်ကို အသုံးပြုပါ</translation>
<translation id="4973970068702235170">ဇစ်လုပ်၍ မရပါ၊ မမျှော်လင့်သည့် အမှား- <ph name="ERROR_MESSAGE" /></translation>
<translation id="4988205478593450158">"<ph name="FILE_NAME" />" ကို ဖျက်လိုသည်မှာ သေချာသလား။</translation>
<translation id="5004584466530475658">ဓာတ်ပုံအသစ် <ph name="FILE_COUNT" /> ပုံ</translation>
<translation id="5024856940085636730">လုပ်ကိုင်မှု တစ်ခုသည် မျှော်လင့်ခဲ့တာထက် ပိုကြာနေသည်။ သင်သည် အဲဒါကို ဖျက်သိမ်းချင်ပါသလား?</translation>
<translation id="5038625366300922036">နောက်ထပ် ကြည့်ရန်...</translation>
<translation id="5081517858322016911">ဖိုင် <ph name="TOTAL_FILE_SIZE" /> ကို ဖျက်လိုက်ပါမည်</translation>
<translation id="509429900233858213">အမှား တစ်ခု ကြုံခဲ့ရသည်။</translation>
<translation id="5144820558584035333">ဟံဂူလ် ၃ စုံ (၃၉၀)</translation>
<translation id="5145331109270917438">ရက်စွဲကို ပြုပြင်ပြီးပါပြီ</translation>
<translation id="5158593464696388225">ပုံအား မသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပါ</translation>
<translation id="5159383109919732130"><ph name="BEGIN_BOLD" />သင့်စက်ပစ္စည်းကို မဖြုတ်ပါနှင့်ဦး။<ph name="END_BOLD" />
အသုံးပြုနေစဉ် ဖြုတ်ပစ်လျှင် ဒေတာများပေျာက်သွားမည်။ ဆောင်ရွက်မှုပြီးသည်ထိ စောင့်ပြီးနောက်၊ Files အက်ပ် ကို သုံးကာဖြုတ်ပါ။</translation>
<translation id="5163869187418756376">မျှဝေခြင်း မအောင်မြင်ပါ။ သင့်ချိတ်ဆက်မှုအား စစ်ဆေးကာ နောက်မှ ထပ်မံကြိုးစားပါ။</translation>
<translation id="5167131699331641907">နယ်သာလန် လက်ကွက်ခုံ</translation>
<translation id="5170477580121653719">Google Drive နေရာလက်ကျန်: <ph name="SPACE_AVAILABLE" />။</translation>
<translation id="5177526793333269655">လက်သည်းပုံ ကြည့်ရန်</translation>
<translation id="5194713942430106590">ကော်လံကို ငယ်စဉ်ကြီးလိုက်စီရန် နှိပ်ပါ။</translation>
<translation id="5218183485292899140">ဆွစ် ပြင်သစ်</translation>
<translation id="5241298539944515331">ဗီယက်နမ် ကီးဘုတ် (VIQR)</translation>
<translation id="5262311848634918433"><ph name="MARKUP_1" />အော့ဖ်လိုင်းဖြစ်နေလျှင်ပင် နေရာတကာမှ ဖိုင်များကို အသုံးပြုပါ။<ph name="MARKUP_2" />
Google Drive ရှိဖိုင်များသည် အမြဲအပ်ဒိတ်ဖြစ်နေပြီး ကြိုက်သည့် စက်ပစ္စည်းမှ ဖွင့်နိုင်သည်။<ph name="MARKUP_3" />
<ph name="MARKUP_4" />သင့်ဖိုင်များကို လုံခြုံစေသည်။<ph name="MARKUP_5" />
သင့်စက်ပစ္စည်း ဘာဖြစ်ဖြစ် သင့်ဖိုင်များကို Google Drive တွင်လုံခြုံစွာ သိမ်းဆည်းထားပါသည်။<ph name="MARKUP_6" />
<ph name="MARKUP_7" />ဖိုင်များကို မျှဝေခြင်း၊ ပြုစုခြင်းနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်း<ph name="MARKUP_8" />
တို့ကို တစ်နေရာတည်းတွင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်<ph name="MARKUP_9" /></translation>
<translation id="5275973617553375938">Google Drive မှရှာဖွေထားသည့် ဖိုင်များ</translation>
<translation id="5318819489018851358">Linux ဖြင့် မျှဝေရန်</translation>
<translation id="5319782540886810524">လာတ်ဗီယား ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="5323213332664049067">လက်တင် အမေရိက</translation>
<translation id="5330145655348521461">ဤဖိုင်များကို အခြား ဒက်စ်တော့မှာ ဖွင့်ထားသည်။ ၎င်းကို ကြည့်ရန် <ph name="USER_NAME" /> (<ph name="MAIL_ADDRESS" />)သို့ သွားပါ။</translation>
<translation id="5335458522276292100"><ph name="FILE_COUNT" /> ကို <ph name="BEGIN_LINK" />Google Drive<ph name="END_LINK" /> သို့ မိတ္ထူကူးနေသည်</translation>
<translation id="5368191757080475556">Linux နှင့် ဖိုင်တွဲကို မျှဝေရန်</translation>
<translation id="5412637665001827670">ဘူဂေးရီးယား ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="5418923334382419584">မြန်မာ ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="5438282218546237410"><ph name="SEARCH_TERM" /> အတွက် ရလဒ်မရှိပါ။</translation>
<translation id="5464696796438641524">ပိုလန် ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="5465122519792752163">နီပေါ ကီးဘုတ်(InScript)</translation>
<translation id="5494920125229734069">အားလုံး ရွေးရန်</translation>
<translation id="5522908512596376669">ဖိုင်စာရင်းကို စာရင်းမြင်ကွင်းအဖြစ် ပြောင်းထားသည်။</translation>
<translation id="5524517123096967210">ဖိုင်ကို ဖတ်ရန် အဖြစ် မပြုလုပ်နိုင်ပါ။</translation>
<translation id="5533102081734025921"><ph name="IMAGE_TYPE" /> ပုံ</translation>
<translation id="5533555070048896610">အက္ခရာဖလှယ်မှု (namaste → नमस्ते)</translation>
<translation id="5640179856859982418">ဆွစ်ဇာလန် ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="5678784840044122290">Linux အပလီကေးရှင်းကို သင်၏ Terminal အတွင်းတွင်ရနိုင်ပြီး သင်၏ Launcher တွင်လည်း သင်္ကေတပြနိုင်ပါသည်။</translation>
<translation id="5686799162999241776"><ph name="BEGIN_BOLD" />မှတ်တမ်းဟောင်း သို့မဟုတ် ဒစ်ခ်အတုကို ချိတ်ဆက်မှုဖြုတ်၍မရပါ<ph name="END_BOLD" />
မှတ်တမ်းဟောင်း သို့မဟုတ် ဒစ်ခ်အတုပေါ်ရှိ ဖိုင်များအားလုံးကို ပိတ်ပြီး ထပ်စမ်းကြည့်ပါ။</translation>
<translation id="5691596662111998220">အူးပ်စ်၊ <ph name="FILE_NAME" /> မှာ မရှိတော့ပါ။</translation>
<translation id="5731409020711461763">ဓာတ်ပုံအသစ် ၁ ပုံ</translation>
<translation id="5752453871435543420">Chrome OS မိုးတိမ်အရံသိမ်းဆည်းခြင်း</translation>
<translation id="5756666464756035725">ဟန်ဂေရီ QWERTY</translation>
<translation id="5771585441665576801">အက္ခရာဖလှယ်မှု (geia → γεια)</translation>
<translation id="5776325638577448643">ဖျက်ပြီး ဖော်မက်ချရန်</translation>
<translation id="5788127256798019331">Play ဖိုင်များ</translation>
<translation id="5817397429773072584">ရိုးရာ တရုတ်</translation>
<translation id="5819442873484330149">ဟံဂူလ် ၃ စုံ(နောက်ဆုံး)</translation>
<translation id="5833610766403489739">ဒီဖိုင်မှာ တစ်နေရာရာကို ရောက်သွားပြီ။ ကျေးဇူးပြုပြီး သင်၏ ဒေါင်းလုဒ် နေရာ ဆက်တင်ကို စစ်ကြည့်ပြီး ထပ်စမ်းပါ။</translation>
<translation id="5838451609423551646">ထည့်သွင်းမှုအားလုံးကို ရွေးချယ်မှုမှ ဖယ်ရှားထားသည်။</translation>
<translation id="5838825566232597749">US Workman နိုင်ငံတကာ</translation>
<translation id="5850516540536751549">ဒီဖိုင် ပုံစံကို မပံု့ပိုးပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီး <ph name="BEGIN_LINK" />Chrome ဝဘ် စတိုး<ph name="END_LINK" />ကို ဝင်ကြည့်လျက် ဒီဖိုင် ပုံစံကို ဖွင့်ပေးနိုင်သည့် အက်ပ်ကို ရှာယူပါ။
<ph name="BEGIN_LINK_HELP" />ပိုမို လေ့လာရန်<ph name="END_LINK_HELP" /></translation>
<translation id="5851063901794976166">ဤတွင် ကြည့်စရာ မရှိပါ...</translation>
<translation id="5857774240076772505"><ph name="FOLDER_NAME" /> ဖိုင်တွဲရှိ ဖိုင်များကို Linux အား ပြုပြင်ခွင့်ပေးပါ</translation>
<translation id="5892290200158927959">ပြင်သစ် BÉPO ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="5911887972742538906">သင်၏ Linux အပလီကေးရှင်းကို ထည့်သွင်းရာတွင် အမှားအယွင်းရှိနေသည်။</translation>
<translation id="5913638992615760742">မိတ္တူကူးယူ၍ မရပါ၊ မျှော်လင့်မထားသော အမှား- <ph name="ERROR_MESSAGE" /></translation>
<translation id="5923484009666796948">ဂျပန်စာ ထည့်သွင်းမှု (ဂျပန်ကီးဘုတ်အတွက်)</translation>
<translation id="5949281959820712067">သင်၏ Google Drive ရှိ ဖိုင်များကို Linux အက်ပ်များအား ပြုပြင်ခွင့်ပြုပါ။ ပြောင်းလဲမှုများကို သင်၏ အခြားစက်ပစ္စည်းများနှင့် စင့်ခ်လုပ်သွားပါမည်။</translation>
<translation id="5955954492236143329"><ph name="NUMBER_OF_ITEMS" /> ခု</translation>
<translation id="5982621672636444458">ရွေးချယ်စရာများ စီရန်</translation>
<translation id="6005282720244019462">လက်တင် အမေရိက ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="6007237601604674381">ရွှေ့ခြင်း မအောင်မြင်ပါ။ <ph name="ERROR_MESSAGE" /></translation>
<translation id="6012987430370760224">မရာသီ ကီးဘုတ် (အသံထွက်)</translation>
<translation id="60357267506638014">ချက် QWERTY</translation>
<translation id="604001903249547235">မိုးတိမ် အရံသိမ်းဆည်းခြင်း</translation>
<translation id="6054173164583630569">ပြင်သစ် ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="6074825444536523002">Google ပုံစံ</translation>
<translation id="6096979789310008754">ရှာဖွေမှုစာသားကို ရှင်းလင်းထားသည်၊ ဖိုင်နှင့် ဖိုင်တွဲများအားလုံးကို ပြထားသည်</translation>
<translation id="6111770213269631447">အက္ခရာဖလှယ်မှု (namaskar → নমস্কার)</translation>
<translation id="6133173853026656527">ရွှေ့နေ <ph name="FILE_NAME" />...</translation>
<translation id="6150853954427645995">အော့ဖ်လိုင်းအသုံးပြုမှုအတွက် ဤဖိုင်အား သိမ်းရန် အွန်လိုင်းပြန်တက်ပြီး ဖိုင်အား ညာဘက်ကလစ်ခေါက်၍ <ph name="OFFLINE_CHECKBOX_NAME" /> ရွေးချယ်စရာအား ရွေးချယ်ပါ။</translation>
<translation id="6189412234224385711"><ph name="EXTENSION_NAME" /> ဖြင့်ဖွင့်ပါ</translation>
<translation id="6199801702437275229">နေရာ အင်ဖိုကို စောင့်နေ...</translation>
<translation id="6205710420833115353">လုပ်ကိုင်မှု အချို့မှာ မျှော်လင့်ခဲ့တာထက် ပိုကြာနေသည်။ သင်သည် အဲဒါတွေကို ဖျက်သိမ်းချင်ပါသလား??</translation>
<translation id="6224253798271602650"><ph name="DRIVE_NAME" /> ဖော်မက်ချရန်</translation>
<translation id="6227235786875481728">ဒီဖိုင်ကို ဖွင့် မရနိုင်ခဲ့ပါ။</translation>
<translation id="6248400709929739064">စာတန်းထိုးခြင်းကို ဖွင့်ပါ</translation>
<translation id="6264347891387618177">အက္ခရာဖလှယ်မှု (selam → ሰላም)</translation>
<translation id="6287852322318138013">ဒီဖိုင်ကို ဖွင့်ရန် အက်ပ် တစ်ခုကို ရွေးပါ</translation>
<translation id="6305012486838822927">လာအို ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="6339034549827494595">ရုရှ အသံထွက်ဆိုင်ရာ (AATSEEL) ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="6339145975392024142">ယူအက်စ် နိုင်ငံတကာ (PC)</translation>
<translation id="6346310558342052870">အသုံးပြုခွင့်ကို ကန့်သတ်ထားသည်</translation>
<translation id="6353618411602605519">ခရိုအေးရှား ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="6356685157277930264">ဖိုင်များ အကြံပြုချက်ဝင်းဒိုး</translation>
<translation id="637062427944097960">ဒီဖိုင်ကို အခြား ဒက်စ်တော့မှာ ဖွင့်ထားသည်။ ၎င်းကို ကြည့်ရန် <ph name="USER_NAME" /> (<ph name="MAIL_ADDRESS" />)သို့ သွားပါ။</translation>
<translation id="6395575651121294044">ပါဝင်သည့် အရာ <ph name="NUMBER_OF_FILES" /> ခု</translation>
<translation id="6398765197997659313">မျက်နှာပြင် အပြည့်မှ ထွက်ရန်</translation>
<translation id="642282551015776456">ဒီအမည်ကို ဖိုင် သို့မဟုတ် ဖိုလ်ဒါ အမည် အဖြစ် သုံးမရနိုင်</translation>
<translation id="6462109140674788769">ဂရိ ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="6466492211071551451">အိုင်ယာလန် ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="6485131920355264772">နေရာခြားအချက်လက် ရယူခြင်း မအောင်မြင်ပါ</translation>
<translation id="6503256918647795660">ဆွစ်ဇာလန် ပြင်သစ် ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="6505918941256367791">တမီးလ် ကီးဘုတ် (InScript)</translation>
<translation id="6509122719576673235">နော်ဝေ ဂျီယန်</translation>
<translation id="653019979737152879">စင့်ခ် လုပ်နေ <ph name="FILE_NAME" />...</translation>
<translation id="6558280019477628686">အမှားအယွင်း ရှိနေပါသည်။ အချို့အရာများကို ဖျက်လိုက်ခြင်း မဖြစ်နိုင်ပါ။</translation>
<translation id="656398493051028875">ဖျက်နေ "<ph name="FILENAME" />"...</translation>
<translation id="6581162200855843583">Google ဒရိုက်ဗ် လင့်</translation>
<translation id="6629841649550503054">အားလုံးကို <ph name="BEGIN_LINK" /> Google Drive<ph name="END_LINK" /> သို့အရံသိမ်းဆည်းမည်!</translation>
<translation id="6751256176799620176">ဖိုင်တွဲ ၁ ခု ရွေးချယ်ထားသည်</translation>
<translation id="6760765581316020278">ဗီယက်နမ် ကီးဘုတ် (VNI)</translation>
<translation id="6806699711453372963">Linux မျှဝေခြင်းကို စီမံရန်</translation>
<translation id="6820687829547641339">Gzip စနစ်ဖြင့် ချုံ့ထားသော tar ဖိုင်မှတ်တမ်း</translation>
<translation id="6827236167376090743">ဤဗီဒီယိုများကို နွားများအိမ်ပြန်လာသည်အထိ ဖွင့်ထားမည်ဖြစ်သည်။</translation>
<translation id="6847101934483209767"><ph name="ENTRY_NAME" /> ကို ရွေးချယ်မှုမှ ဖယ်ရှားထားသည်။</translation>
<translation id="6862635236584086457">ဒီဖိုလ်ဒါ ထဲမှာ သိမ်းဆည်းထားသည့် ဖိုင်များ အားလုံးကို အွန်လိုင်းမှာ အလိုအလျောက် ဘက်အာပ် လုပ်ပေးသည်</translation>
<translation id="6870130893560916279">ယူကရိန်း ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="6878261347041253038">ဒေဝနာဂရီ ကီးဘုတ် (Phonetic)</translation>
<translation id="691516599546977041"><ph name="FOLDER_NAME" /> သို့ သိမ်း၍မရပါ။ တည်းဖြတ်ထားသည့် ပုံများ 'ဒေါင်းလုဒ်' ဖိုင်တွဲသို့ သိမ်းပါမည်။</translation>
<translation id="6934241953272494177">သင့်မီဒီယာစက်ပစ္စည်းအား စကင်ဖတ်နေသည်...
<ph name="FILE_COUNT" /> တွေ့ပါသည်</translation>
<translation id="6935521024859866267">ဇောက်ထိုး မိုးမျှော်</translation>
<translation id="6939777852457331078">US Workman ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="696203921837389374">မိုဘိုင်း ဒေတာ ပေါ်မှာ စင့်က်လုပ်မှုကို ဖွင့်ပေးရန်</translation>
<translation id="6978611942794658017">ဤဖိုင်ကို Windows software ဆော့ဝဲသုံးသော ကွန်ပျူတာအတွက် ပြုလုပ်ဖန်တီးထားသည်။ Chrome OS သုံးသော သင့်စက်ပစ္စည်းနှင့် တွဲဖက်လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း မရှိပါ။ သင့်လျော်သည့် အစားထိုး အက်ပ် အား Chrome Web Store တွင် ရှာပါ။</translation>
<translation id="6990081529015358884">သင့်ဆီမှာ နေရာ ကုန်သွားပြီ</translation>
<translation id="6998711733709403587"><ph name="SELCTED_FOLDERS_COUNT" /> ဖိုင်တွဲရွေးထား</translation>
<translation id="7014174261166285193">ထည့်သွင်းခြင်း မအောင်မြင်ပါ။</translation>
<translation id="7040138676081995583">ဖွင့်ရန် သုံးရမည်မှာ...</translation>
<translation id="7100897339030255923">အရာ <ph name="COUNT" /> ခုကို ရွေးထား</translation>
<translation id="7106346894903675391">နောက်ထပ်သိုလှောင်မှု ဝယ်မည်...</translation>
<translation id="7126604456862387217">'&lt;b&gt;<ph name="SEARCH_STRING" />&lt;/b&gt;' - &lt;em&gt;ဒရိုက်ရှာ&lt;/em&gt;</translation>
<translation id="7170467426996704624">အက္ခရာဖလှယ်မှု (salam → ሰላም)</translation>
<translation id="7172053773111046550">အက်စ်တိုနီးယား ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="719009910964971313">US Programmer Dvorak လက်ကွက်</translation>
<translation id="7191454237977785534">ဖိုင်ကို အဖြစ် သိမ်းရန်</translation>
<translation id="7222624196722476520">ဘူဂေရီးယား Phonetic ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="7268659760406822741">ရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ</translation>
<translation id="7283041136720745563">သင့် Google Drive ခွဲတမ်းမှာ မလုံလောက်ပါ။</translation>
<translation id="7295662345261934369">အခြားသူများနှင့် မျှဝေရန်</translation>
<translation id="7339898014177206373">ဝင်ဒိုး အသစ်</translation>
<translation id="7348749398828259943">US Workman နိုင်ငံတကာ ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="7359359531237882347">ဖိုင် <ph name="NUMBER_OF_ITEMS" /> ခု မိတ္တူကူးနေသည်…</translation>
<translation id="7375951387215729722"><ph name="COLUMN_NAME" /> အရ ကြီးစဉ်ငယ်လိုက် စီထားသော ဖိုင်စာရင်း။</translation>
<translation id="7389722738210761877">ထိုင်း ကီးဘုတ် (TIS 820-2531)</translation>
<translation id="7396038720194014279">ဟိန္ဒီကီးဘုတ် (အသံထွက်)</translation>
<translation id="7417453074306512035">အီသီယိုးပီးယား ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="7417705661718309329">Google မြေပုံ</translation>
<translation id="7419631653042041064">ကာတာလန် ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="7434823369735508263">UK Dvorak ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="7474889694310679759">ကနေဒါ အင်္ဂလိပ် ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="7489215562877293245"><ph name="FILE_COUNT" /> တွေ့ပါသည်
<ph name="BEGIN_LINK" />Google Drive<ph name="END_LINK" /> သို့ မိတ္ထူကူးရန် အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ</translation>
<translation id="7505167922889582512">ဖျောက်ထားသော ဖိုင်များ ပြရန်</translation>
<translation id="7627790789328695202">အိုး၊ <ph name="FILE_NAME" /> ရှိပြီးဖြစ်သည်။ အမည်ပြန်ပေး၍ ထပ်မံ ကြိုးစားကြည့်ပါ။</translation>
<translation id="7628656427739290098"><ph name="PERCENT" />% ပြီးပြီ။</translation>
<translation id="7654209398114106148">ဖိုင် <ph name="NUMBER_OF_ITEMS" /> ခုကို ရွှေ့နေသည်…</translation>
<translation id="7706319470528945664">ပေါ်တူဂီ ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="7730494089396812859">မိုးတိမ်အရံသိမ်းဆည်းခြင်း အသေးစိတ်များကို ပြသမည်</translation>
<translation id="7748626145866214022">လုပ်ဆောင်ချက်ဘားတန်းတွင် နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာများ ရှိပါသည်။ လုပ်ဆောင်ချက်ဘားတန်းကို ရွေးရန် Alt + A ကို နှိပ်ပါ။</translation>
<translation id="7788080748068240085">"<ph name="FILE_NAME" />" အား လိုင်းမဲ့အခြေနေတွင် သိမ်းရန် နောက်ထပ် <ph name="TOTAL_FILE_SIZE" /> နေရာအား ရှင်းလင်းရပါမည်:<ph name="MARKUP_1" />
<ph name="MARKUP_2" />လိုင်းမဲ့အခြေနေတွင် သင်အသုံးမလိုတော့သည့် ဖိုင်များကို ချိတ်ဆက်မှု ဖြုတ်ပါ<ph name="MARKUP_3" />
<ph name="MARKUP_4" />သင့် ဒေါင်းလုဒ် ဖိုင်တွဲရှိ ဖိုင်များကို ဖျက်ပါ<ph name="MARKUP_5" /></translation>
<translation id="7794058097940213561">စက်ပစ္စည်းကို ပုံစံချရန်။</translation>
<translation id="7799329977874311193">HTML စာတမ်း</translation>
<translation id="7821462174190887129"><ph name="FILE_COUNT" /> တွေ့ပါသည်
သင့် Google Drive ခွဲတမ်းမှာ မလုံလောက်ပါ။ နောက်ထပ် <ph name="FILE_SIZE" /> လိုအပ်ပါသည်။
<translation id="7825423931463735974">တမီးလ် ကီးဘုတ်(Tamil99)</translation>
<translation id="7839804798877833423">ဒီဖိုင်များကို ရယူခြင်းက မိုဘိုင်း ဒေတာ၏ <ph name="FILE_SIZE" />ခန့်ကို အသုံးပြုမည်။</translation>
<translation id="7846076177841592234">ရွေးချယ်ထားသောဖိုင်များကို ပြန်ဖျက်ပါ</translation>
<translation id="7853966320808728790">ပြင်သစ် BÉPO</translation>
<translation id="7864662577698025113">ဝန်ဆောင်မှုအသစ် ထည့်ရန်</translation>
<translation id="7873831373602885875"><ph name="FOLDER_NAME" /> သို့သိမ်း၍မရပါ။ တည်းဖြတ်မှု အားလုံးကို 'ဒေါင်းလုဒ်များ' ဖိုင်တွဲရှိ <ph name="DOWNLOADS_FOLDER" /> ဖိုင်တွဲသို့ သိမ်းပါမည်။</translation>
<translation id="7881969471599061635">စာတန်းထိုးခြင်းကို ပိတ်ပါ</translation>
<translation id="78946041517601018">မျှဝေထားသော ဒရိုက်ဗ်များ</translation>
<translation id="7896906914454843592">US တိုးချဲ့ ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="7898607018410277265">ဂူဂျာရာသီ ကီးဘုတ် (အသံထွက်အသစ်)</translation>
<translation id="7917972308273378936">လီသွေးနီးယား ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="7925686952655276919">စင့်ခ်လုပ်ရန် အတွက် မိုဘိုင်းဒေတာကို မသုံးပါနှင့်</translation>
<translation id="7928710562641958568">ကိရိယာကို ထုတ်ပစ်ရန်</translation>
<translation id="7953739707111622108">ဤစက်ပစ္စည်း၏ ဖိုင်စနစ်ကို မသိသောကြောင့် ဖွင့်၍မရပါ။</translation>
<translation id="7987485481246785146">ဆိုရာနီ ကူးရ်ဒ် အာရပ်-အ​ခြေခံ ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="8008366997883261463">ဂျက် ရစဲလ် တယ်ရီယာ</translation>
<translation id="8031722894461705849">ဆလိုဗက် ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="8042602468072383151"><ph name="AUDIO_TYPE" /> အသံ</translation>
<translation id="8052887694493382350">ဤဖိုင်ကို Windows ဆော့ဖ်ဝဲအသုံးပြုသည့် PC အတွက် ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကို Chrome OS ထည့်သွင်းထားသည့် သင့်စက်ပစ္စည်းတွင် ဖွင့်၍မရနိုင်ပါ။ <ph name="BEGIN_LINK_HELP" />ပိုမိုလေ့လာရန်<ph name="END_LINK_HELP" /></translation>
<translation id="8066773524873206594">တည်းဖြတ်မှု အားလုံးကို <ph name="DOWNLOADS_FOLDER" /> သို့ သိမ်းပါမည်။</translation>
<translation id="8106045200081704138">ကျွန်ုပ်အား မျှဝေထား</translation>
<translation id="8117957376775388318">ဒါယီ ရိုက်သွင်းမှု နည်း</translation>
<translation id="8137331602592933310">"<ph name="FILENAME" />" ကို သင့်အား မျှဝေပေးခဲ့သည်။ သင်သည် ၎င်းကို မပိုင်ဆိုင်၍ ၎င်းကို သင် မဖျက်နိုင်ပါ။</translation>
<translation id="8145409227593688472">ဝူဘီ ရိုက်သွင်းမှု နည်း</translation>
<translation id="8148264977957212129">ဖျဉ်းယင်း ထည့်သွင်းမှု နည်းလမ်း</translation>
<translation id="8153607920959057464">ဒီဖိုင်ကို ဖော်ပြ၍ မရနိုင်ခဲ့ပါ။</translation>
<translation id="8154842056504218462">ထည့်သွင်းမှုအားလုံး ရွေးချယ်ထားသည်။</translation>
<translation id="8157684860301034423">အက်ပ်အချက်အလက်များကို ရယူ၍မရပါ။</translation>
<translation id="8160015581537295331">စပိန် ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="8193175696669055101">ကိရိယာ မော်ဒယ်လ်</translation>
<translation id="8223479393428528563">အင်တာနက်ပေါ်တွင်မရှိသည့်အခါ အသုံးပြုရန်အတွက် ဤဖိုင်များအား သိမ်းရန် အွန်လိုင်းပေါ်ပြန်လာပြီး ဖိုင်များအား ညာဘက်ကလစ်ခေါက်ပြီး <ph name="OFFLINE_CHECKBOX_NAME" /> ရွေးချယ်စရာအား ရွေးချယ်ပါ။</translation>
<translation id="8269755669432358899">ဖိုင်တုံ့ပြန်မှု အကန့်များ လျှော့ပြရန်</translation>
<translation id="8279388322240498158">ဆိုရာနီ ကူးရ်ဒ် အင်္ဂလိပ်-အ​ခြေခံ ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="8280151743281770066">အာမန်းနီးယမ်း အသံထွက်</translation>
<translation id="8297012244086013755">ဟံဂူလ် ၃ စုံ(Shift မသုံး)</translation>
<translation id="8312871300878166382">ဖိုင်တွဲထဲသို့ ကူးထည့်ရန်</translation>
<translation id="8329978297633540474">ရိုးရိုး စာသား</translation>
<translation id="8336153091935557858">မနေ့က <ph name="YESTERDAY_DAYTIME" /></translation>
<translation id="8336579025507394412">အိုက်စလန် ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="8342318071240498787">တူညီသည့် အမည်ဖြင့် ဖိုင်တစ်ဖိုင် သို့မဟုတ် လမ်းကြောင်းတစ်ခု ရှိပြီးဖြစ်သည်။</translation>
<translation id="8382450452152102026"><ph name="FOLDER_NAME" /> သို့</translation>
<translation id="8391950649760071442">အက္ခရာဖလှယ်မှု (emandi → ఏమండీ)</translation>
<translation id="8412586565681117057">အမြန် ရိုက်သွင်းရေး နည်း</translation>
<translation id="8418113698656761985">ရူမေနီးယား ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="8432745813735585631">US Colemak ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="8456681095658380701">အမည် မမှန်</translation>
<translation id="8466234950814670489">Tar စနစ်ဖြင့် ချုံ့ထားသော ဖိုင်မှတ်တမ်း</translation>
<translation id="8467473010914675605">ကိုရီးယား ထည့်သွင်းရန် နည်းလမ်း</translation>
<translation id="8475647382427415476">Google Drive က "<ph name="FILENAME" />" ကို ယခုချက်ချင်း စင့်က် မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါ။ Google Drive သည် နောက်မှာ ထပ်စမ်းကြည့်မည်။</translation>
<translation id="8487700953926739672">Offline ရနိုင်</translation>
<translation id="8525306231823319788">မျက်နှာပြင် အပြည့်</translation>
<translation id="8569764466147087991">ဖွင့်ရန် ဖိုင်ရွေးပါ</translation>
<translation id="8579285237314169903"><ph name="NUMBER_OF_FILES" /> ခုအား စင့်လုပ်နေခြင်း...</translation>
<translation id="8600173386174225982">ဖိုင်စာရင်းကို ပုံသေးမြင်ကွင်းအဖြစ် ပြောင်းထားသည်။</translation>
<translation id="8601932370724196034">Crostini ပုံပါဝင်သော ဖိုင်</translation>
<translation id="8698464937041809063">Google ရေးဆွဲခြင်း</translation>
<translation id="8719721339511222681"><ph name="ENTRY_NAME" /> ကို ရွေးချယ်ထားသည်။</translation>
<translation id="8722421161699219904">US နိုင်ငံတကာ ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="874420130893181774">အစဉ်အလာ Pinyin ရိုက်သွင်းမှု နည်း</translation>
<translation id="8775404590947523323">သင်၏ တည်းဖြတ်မှုများကို အလိုလို သိမ်းဆည်းပေးသည်။ <ph name="BREAKS" />မူရင်း ပုံ၏ ကော်ပီကို ထားရှိရန်၊ "မူရင်းကို ဖျက်ရေးရန်"ကို ခြစ်ထားမှု ဖျက်ပေးပါ။</translation>
<translation id="8803496343472038847">ရုရှား Phonetic ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="8810671769985673465">ဇစ်လုပ်၍ မရပါ၊ ဖိုင်ရှိနေပါသည်- "<ph name="FILE_NAME" />"</translation>
<translation id="8834164572807951958">ဤအရာများ၏ မိတ္တူများကို '<ph name="DESTINATION_NAME" />' ၏ အဖွဲ့ဝင်များသည် အသုံးပြုခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။</translation>
<translation id="885381502874625531">ဘေလာရုစ် ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="8860454412039442620">အိတ်ဇ်ဇဲလ် ဇယားစာမျက်နှာပြင်</translation>
<translation id="8901822611024316615">ချက် QWERTY ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="8960999352790021682">ဘင်္ဂါလီ ကီးဘုတ် (Phonetic)</translation>
<translation id="8965697826696209160">နေရာ လုံလုံလောက်လောက် မရှိပါ။</translation>
<translation id="9034924485347205037">Linux ဖိုင်များ</translation>
<translation id="9035012421917565900">၎င်းတို့ကို '<ph name="DESTINATION_NAME" />' သို့ ပြန်ရွှေ့၍မရသည့်အတွက် ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကို တစ်ဆင့်နောက်ပြန်၍ ရမည်မဟုတ်ပါ။</translation>
<translation id="9038620279323455325">"<ph name="FILE_NAME" />" အမည်ဖြင့်ဖိုင် ရှိပြီးဖြစ်သည်။ အခြားအမည်ရွေးပါ။</translation>
<translation id="9110990317705400362">သင်၏ ဘရောင်ဇာ သုံးမှု ပိုလုံခြုုံလာရေး နည်းလမ်းများကို ကျွန်ုပ်တို့ တချိန်လုံး ရှာကြံနေကြပါသည်။ အရင်တုန်းက၊ ဘယ် ဝက်ဘ်ဆိုက်မဆို သင်၏ ဘရောက်ဇာ ထဲသို့ တိုးချဲ့မှု တစ်ခုခိုကို ထည့်ပေးရန် တိုက်တွန်းခဲ့ပါမည်။ Google Chrome ၏ နောက်ဆုံး ဗားရှင်း ထဲမှာ၊ သင်သည် တိုးချဲ့မှု စာမျက်နှာ ထဲကို ထည့်ပေးခြင်း မှတစ်ဆင့် ထိုတိုးချဲ့မှုများကို ထည့်သွင်းလိုကြောင်း သင်သည် အတိအလင်း ပြောရန် လိုပါသည်။ <ph name="BEGIN_LINK" />ပိုမို လေ့လာရန်<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="9129931661813833980">ဖိုင်တွဲကို ပင်ထိုးရန်</translation>
<translation id="9130775360844693113">'<ph name="DESTINATION_NAME" />' ၏ အဖွဲ့ဝင်များသည် ဤအရာများကို အသုံးပြုခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။</translation>
<translation id="9131598836763251128">ဖိုင်များကို တစ်ခု သို့မဟုတ် ပိုများပြီး ရွေးရန်</translation>
<translation id="9133055936679483811">ဇစ်လုပ်ခြင်း မအောင်မြင်ပါ။ <ph name="ERROR_MESSAGE" /></translation>
<translation id="9134524245363717059">ဤဖိုင်ကို Macintosh ဆော့ဝဲသုံးသော ကွန်ပျူတာအတွက် ပြုလုပ်ဖန်တီးထားသည်။ Chrome OS သုံးသော သင့်စက်ပစ္စည်းနှင့် သဟဇာတမဖြစ်ပါ။ သင့်လျော်သည့် အစားထိုး အက်ပ် အား Chrome Web Store တွင် ရှာပါ။</translation>
<translation id="913758436357682283">မြန်မာ မြန်စံ ကီးဘုတ်</translation>
<translation id="9153744823707037316">Array ရိုက်သွင်းမှု နည်း</translation>
<translation id="9154418932169119429">ဤပုံသည် offline မရနိုင်ပါ။</translation>
<translation id="9206487995878691001">Cangjie ရိုက်သွင်းမှု နည်း</translation>
<translation id="942954117721265519">ဤလမ်းကြောင်းတွင် မည်သည့် ပုံမျှမရှိပါ။</translation>
<translation id="945522503751344254">အကြံပြုချက် ပေးပို့မည်</translation>
<translation id="947144732524271678"><ph name="FROM_ENTRY_NAME" /> မှ<ph name="TO_ENTRY_NAME" /> သို့ ထည့်သွင်းမှု အပိုင်းအခြား <ph name="ENTRY_COUNT" /> ခု ကို ရွေးထားသည်။</translation>
<translation id="988685240266037636">"<ph name="FILE_NAME" />" အမည်ဖြင့် ဖိုင်ရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းကို အစားထိုးလိုပါသလား။</translation>